မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အထူးဆန်းဆုံး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပွဲကြီး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လူကုန်ကူးတဲ့ လုပ်ငန်း အဓိက တရားခံ က အရင် သန်းရွှေ အစိုးရနဲ့ အခု သိန်းစိန် အစိုးရဘဲ
ဖိလွန်းရင် ကြွ “မွတ်စလင်တွေ အရင်ကထက် ပိုပြီးဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတယ်” »
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အထူးဆန်းဆုံး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပွဲကြီး
But they are promising equally that they would practice more PATRIOTISM to protect the Bama race and Buddhism. In the process their unspoken promise is to step on the heads of Kalars.
၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်ခုိုင်ဖြိုးနဲ့ NLDသာ ထိပ်တုိုက်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။
ဖြစ်ရုိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ သဘာဝအတုိုင်းဆုိုရင် ပါတီကြီးနှစ်ခုတုို့ဟာ လွှတ်တော်ကာလအတွင်း သူတုို့ပါတီကသာလျှင် လူထု၊ လူတန်းစားအသီးသီးကုို ပိုအကျိုးပြုခဲ့၊ ပိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဆုိုပြီး သူတုို့လုပ်ခဲ့တာတွေကုို အပြိုင်အဆုိုင် အထောက်အထားတွေ တင်ပြကြမယ်။
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရင် နောက်လွှတ်တော်ကာလမှာ လူထု၊ လူတန်းစားတွေကို အခုထက်ပုိုပြီး အကျိုးပြုမယ်။ အခုထက်ပိုပြီး ကာကွယ်မယ်လုို့ အပြိုင်အဆုိုင် ကတိတွေပေးရပါမယ်။
စဉ်းစားကြပါဗျာ။ အဲဒီလိုလုပ်လို့ ဖြစ်နုိုင်ပါ့မလား။ သဘာဝကျမလား။ ပြောထွက်ရဲလား။
သူတုို့ပါတီကြီးနှစ်ခုမှာ လူထု လူတန်းစားတွေ အကျိုးဘက်က ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိလား။ သူတို့ပါတီကြီးနှစ်ခုက ကာကွယ်အကျိုးဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ မြင်တဲ့၊ ယုံကြည်တဲ့၊ ခံစားတဲ့ လူထု၊ လူတန်းစားဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ရှိလား။
ဒါကြောင့် ပါတီကြီးနှစ်ခုက လူထု၊ လူတန်းစားအသီးသီးကုို လက်တွေ့ မဲဆွယ်တဲ့အခါမှာ –
ဥပမာ လယ်သမားတွေနဲ့တွေ့လုို့ လယ်သမားတွေကို ကတိပေးခြင်းပေးရင် ပြည်ခုိုင်ဖြိုးပါတီက ကျနော်တုို့အာဏာရရင် အရင်ကလောက် လယ်တွေ မသိမ်းတော့ဘူး။ အရင်ကလောက် မရက်စက်တော့ပါဘူး။ လျော့သိမ်းပါမယ်။ လျော့ရက်စက်ပါမယ်လို့သာ ကတိပေးနုိုင်မယ်။
NLDကလည်း ကျနော်တုို့ အာဏာရရင် လယ်သမားတွေကုို အရင်ကလုို ပစ်မထားတော့ဘူး။ မသိချင်ယောင် မဆောင်တော့ပါဘူး။ စကားတတ်တုိုင်း လှည့်ပတ်ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ဟုိုလူလုပ်ရမှာ ဒီလူလုပ်ရမှာလို့ လူတစ်ကာကို လက်ညှိုး မထုိုးပြတော့ပါဘူး။ တစ်ကယ်ဘဲ၊ အဟုတ်ဘဲ၊ ဘုရားစူး မိုးကြိုးပစ် ကူညီပါတော့မယ်လို့သာ ကတိပေးနုိုင်ပါမယ်။
ဒီအတုိုင်းဘဲ အလုပ်သမားနဲ့ တွေ့တွေ့၊ ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့တွေ့၊ တုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တွေ့တွေ့၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ဘဲ တွေ့တွေ့၊ လူနည်းစု လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူတွေနဲ့ဘဲ တွေ့တွေ့ ကျနော်တုို့ အရင်ကလို မဆုိုးတော့ပါဘူး။ အရင်ကလောက် မဆုိုးတော့ပါဘူး။ အရင်ကလုို မသိချင်ယောင်ဆောင် မနေတော့ပါဘူးလို့သာ ကတိပေးနုိုင်ကြမယ်။
ဒီလုိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဘာလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ ပြောမယ်ဆုိုရင် ဘယ်လယ်သမား၊ အလုပ်သမား၊ ဆင်းရဲသား၊ ကျောင်းသား လူနည်းစုတွေက ယုံကြမှာလဲ။ ဗြောင်လိမ်ရာကျနေမှာပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့သမုိုင်းမှာ အထူးဆန်းဆုံး မဲဆွယ်ပွဲကြီးလို့ ပြောရတာပါ ဟရို့
This entry was posted on May 9, 2015 at 12:35 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.